रत्नपार्कमा उभिने सबै महिला 'माल' हुन् ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २६ फाल्गुन २०७४, शनिबार ०३:५३ |
वेश्या शब्द सुन्दा कतिलाई अपाच्य र असभ्य लाग्छ तर महिलालाई समाजले आज पनि भोग्याका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ। कहिलेकाहीं लाग्छ– व्यवहारका आधारमा हेर्ने हो भने त समाजमा उत्ति नै पुरुष वेश्या पनि छन् तर हाम्रो समाजमा वेश्या भन्नेबित्तिकै प्रायः सबैले स्त्री जातिलाई बुझ्छन्। पोथी वेश्या हुन्छे भने भाले वेश्या पनि अवश्य हुन्छ किनकि वेश्या भोग्ने पनि वेश्या नै हो।
मेरी साथीले मलाई बताएको एउटा कथाले समाजले राम्रो पहिरनमा सजिएर साँझबिहान हिँड्ने स्त्रीलाई पनि वेश्या देख्ने तथ्य उजागर गर्छ। मेरी साथी केहीअघि साँझको समय लाजिम्पाटबाट आफ्नो निवासतर्फ फर्कंदै रहिछन्। रत्नपार्क पुग्दा आफ्नो निवास कालिमाटी पुग्न उनले बस पाइनन्। उनले हिँडेरै कालीमाटी जाने निधो गरिछन्। त्यत्तिकैमा उनका श्रीमान्ले उनलाई फोन गरेर केहीबेर रत्नपार्कमै कुरिराख्न र आफू लिन आउने बताए। साथीका अनुसार उनी रत्नपार्कमा पाँच मिनेटजति मात्र उभिइन् तर त्यसबीचमा धेरै पुरुषले उनलाई ‘दाम कति हो ? , रेट कति हो ? ’ भन्दै उनको मोल सोधेछन्। मेरी साथीले रत्नपार्कमा उनी उभिएको त्यो पाँच मिनेट जीवनकै त्रासदपूर्ण र लामो भएको बताइन्।
(शनिवारको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित पिपला ढुङ्गानाको लेखको आंश)
Previousअष्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरुको लागि सबैभन्दा उपयुक्त सात सहरहरु , विशेषता के ?
Nextकृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित
एनआरएनए अस्ट्रेलियाको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा यस्तो देखियो !
३१ असार २०७२, बिहीबार ०५:४०
किन कमजोर भयो मधेसी मोर्चाको आन्दोलन ?
२३ माघ २०७२, शनिबार १५:०१
सरकार,नेपाली स्वाभिमानलाई दाउमा राख्ने नेतालाई के कारवाही हुन्छ ?
२० माघ २०७२, बुधबार ०१:५४
रसियामा एकैपटक तीनवटा सुर्य उदायो (भिडियो सहित )
८ फाल्गुन २०७१, शुक्रबार १६:४६